Manchester United Oo Heegan Ugu Jirta Griezmann Oo Ka Tegaya Atletico Madrid | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Manchester United Oo Heegan Ugu Jirta Griezmann Oo Ka Tegaya Atletico Madrid
(15-12-2017) Manchester United ayaa heshay war ay ku faraxday, kaddib markii uu tababaraha Atletico Madrid shaaciyey in weeraryahanka kooxdiisa ee Antoine Griezmann uu ka tegi doono kooxda, loona ogolaan doono inuu tago.
Manchester ayaa si aad ah u dooneysay Griezmann xagaagii, hase yeeshee, waxa albaabada xidhatay Atletico oo aan awoodaynin inay ciyaartooyo beddela soo iibsato, maadaama xayiraadi ka saarnayd suuqa iibka.
Atletico Madrid waxay hadda xor u tahay inay keensato ciyaartoyga ay doonto, maadaama laga qaaday cuno-qabatayntii saarnayd, waxaana ugu horreeya ee funaanaddeeda xidhan Diego Costa oo ka tegay Chelsea, kuna laabtay kooxdaas, hase yeeshee, xayiraaddu u diiday inuu garoomada soo galo illaa sannadka cusub bilanayo.
Manchester United waxay xagaagii 75 milyan oo Gini ku iibsatay Roomelu Lukaku, hase yeeshee, xiddigan u dhashay Faransiiska ayaa uu tababare Jose Mourinho doonayaa inuu ku xoojiyo kooxdiisa xili ciyaareedka dambe.
Tababare Simeone oo u warramay L’Equipe ayaa waxa uu sheegay in aanu ka istaagi doonin Griezmann haddii uu codsado inuu ka tago kooxda.
“Haddii uu cyaartoy ii yimaaddo oo uu igu yidhaahdo, ‘Tababare, waxa noloshayda aan haystaa hal fursad oo aan kooxdaas igu ciyaaro, waxaan doonayaa inaan tago’ waxa aan odhayaa haye.” Sidaas ayuu yidhi Simeone.
Waxa uu intaa ku daray in uu Griezmann u baahan yahay inuu koro oo uu horumar ciyaareed sameeyo, isla markaana loo ogolaan doono inuu iska tago, sidii loo sameeyey Diego Costa iyo Arda Turan.